အူးဘာအိစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
Meal delivery serviceတမ်းပလိတ်:SHORTDESC:Meal delivery service
အွန်လိုင်း အစားအသောက်မှာယူခြင်း လုပ်ငန်း
ဩဂုတ် ၂၀၁၄; ၇ နှစ် အကြာက (၂၀၁၄-၀၈)
ဆန်ဖရန်စစ္စကို, ကယ်လီဖိုးနီးယား, အမေရိကန်
$1.46 billion (2018)
အူးဘာအိစ် (အင်္ဂလိပ်: Uber Eats) သည် အမေရိကန်မှ အွန်လိုင်းအခြေပြု အစားအသောက် မှာယူ ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု တခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုတွင် အူးဘာ ကားငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းက စမိတ်ဆက်သည်။ ရုံးချုပ်မှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် ဖြစ်သည်။ 
၃.၁ ဈေးကွက်မောင်ပိုင်စီးမှုအဖြစ် သမုတ်ခြင်း
အူးဘာအိစ်တမန်အား နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ အမ်စတာဒမ်မြို့၌ တွေ့ရစဉ်
အူးဘာအိစ် ဆိုင်ကယ်တမန်အား ပနားမားမြို့၌ တွေ့ရစဉ်
ဆက်ဝေးစားသောက်ဆိုင်တွင် ကပ်ထားသော အူးဘာအိစ်တံဆိပ်
အူးဘာကုမ္ပဏီက ၂၀၁၄ ခု၊ ဩဂုတ်လတွင် အစားပို့စနစ်ကို အူးဘာဖရက်ရှ် (UberFRESH) အမည်နှင့် အူးဘာဝန်ဆောင်မှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းကာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန္တာမွန္နိကာမြို့တွင် စသည်။  ၂၀၁၅ ခုတွင် ပလက်ဖောင်းကို အူးဘာအိစ်ဟူ၍ အမည်ပြောင်းပြီး  သီးခြား အပ္ပလီကေးရှင်းအနေနှင့် ထုတ်သည်။  လန်ဒန်မြို့တွင် ၂၀၁၆ ခု၌ ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ 
၂၀၁၈ ခု၊ ဩဂုတ်လတွင် ပုံသေနှုန်း ၄.၉၉ ဒေါ်လာမှသည် အကွာအဝေးအလိုက် အခပေးရသည့်စနစ်သို့ ပြောင်းသည်။  အနည်းဆုံး ၂ ဒေါ်လာမှသည် ၈ ဒေါ်လာအထိ ကျမည်ဖြစ်၏။  အိုင်ယာလန်နှင့် ယူကေတို့တွင်မူ အမှာ၏တန်ဖိုးအလိုက် အခယူသည်။ ၂၀၁၉ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီတွင် အမှာ၏ ၃၅ ရခိုင်နှုန်းကို အခယူနေရာမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျော့ကောက်သည်။ 
၂၀၁၈ ခု၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဥရောပဈေးကွက်ရှိ လုပ်အားစုကို သုံးဆတိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။ ဥရောပ နိုင်ငံ ၂၀ ရှိ မြို့ပေါင်း ၂၀၀ တွင် လည်ပတ်နေပြီဟုလည်း အသိပေးသည်။ 
၂၀၁၉ ခုတွင် ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်းကို ဒရုန်းများဖြင့် ပို့မည်ဟု ဆိုသည်။  အက်ပဲကုမ္ပဏီနှင့် လက်တွဲကာ အက်ပဲကဒ်ဖြင့် ငွေရှင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သည်။  ဇူလိုင်လတွင် စားသောက်ဆိုင်မသွားမီ ကြိုမှာကာ ဆိုင်ရောက်သည်နှင့် တန်းစားနိုင်မည့် အကြိုမှာရွေးချယ်ခွင့်ကို အချို့မြို့များတွင် ထည့်ပေးသည်။  စက်တင်ဘာလတွင် ပြိုင်ဘက်အလွန်များသော တောင်ကိုရီးယားဈေးကွက်ကို လက်လွှတ်လိုက်သည်။  အောက်တိုဘာလတွင် အမှာတင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်ပေးသည်။  ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် စားသုံးသူအနေဖြင့် အမှာတင်ထားတာ ကိုယ်တိုင်ယူခြင်းဖြင့် ပို့ခချွေတာနိုင်ပြီ ဖြစ်၏။ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်တွင် ဘာဂါကင်းကို အမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးတွင် ပို့ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။ 
၂၀၂၀ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက်တွင် အိန္ဒိယရှိ အစားပို့လုပ်ငန်း ဇိုမတိုက အိန္ဒိယရှိ အူးဘာအိစ်၏ စတော့အားလုံးကို ဝယ်လိုက်ပြီး အပြန်အနေဖြင့်အူးဘာအိစ်က ဇိုမတို၏စတော့ ၉.၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကို ရမည်ဖြစ်သည်။  ဤနည်းဖြင့် ဇိုမတိုက အိန္ဒိယရှိ အူးဘာအိစ်သုံးသူအားလုံးကို ရသွားသည်။ သဘောတူညီမှုရပြီးနောက် ဇိုမတိုမှာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် တန်ကြေး ၃.၅၅ ဘီလျံတန်သောလုပ်ငန်း ဖြစ်လာသည်။ 
၂၀၂၀ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက်တွင် ယူကေရှိ မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်မှ အမှာပို့ခွင့်ကို ယူကေအခြေစိုက် အစားပို့လုပ်ငန်း ဂျက်အိက ရသွားသည့်အတွက် အူးဘာအိစ် မက်ဒေါ်နယ်စာများ ပို့ခွင့်မရပြီ။  အမေရိကန်၌လည်း မက်ဒေါ်နယ်က အခြားလုပ်ငန်းနှင့် လက်တွဲသည့်အတွက် ၂၀၁၉ ကတည်းကပင် ပို့ခွင့် ဆုံးနှင့်သည်။  မတ်လတွင် ကိုဗစ်ကာလကြောင့် သုံးသူ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာသည်။  မေလ ၄ ရက်တွင် အာရပ်ပြည်ထောင်စုမှ နှုတ်ထွက်ကာ လုပ်လက်စဝန်ဆောင်မှုကို ဒူဘိုးအခြေစိုက် ကားငှားလုပ်ငန်း ကရင်းကို လွှဲသည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် အီဂျစ်တို့မှာလည်း ထွက်သည်။ 
Users can read menus, order, and pay for food from participating restaurants using an application on the iOS or Android platforms, or throughaweb browser. Users are also able to tip for delivery. Payment is charged toacard on file with Uber. Meals are delivered by couriers using cars, scooters, bikes, or on foot.
During the COVID-19 pandemic, Uber Eats has been criticised for charging struggling fast food restaurants 30% to 35% commission.
In 2014, Uber Eats had an "F" rating with the Better Business Bureau (BBB), primarily attributed to the lack of responsiveness to customer complaints submitted via their system. As of 2020, Uber Eats' rating with the BBB is "NR" or "No Rating".
In April 2020,agroup of New Yorkers sued Uber Eats along with DoorDash, GrubHub, Postmates, accusing them of using their market power monopolistically by only listing restaurants on their apps if the restaurant owners signed contracts which include clauses that require prices be the same for dine-in customers as for customers receiving delivery. The plaintiffs state that this arrangement increases the cost for dine-in customers, as they are required to subsidize the cost of delivery; and that the apps charge “exorbitant” fees, which range from 13% to 40% of revenue, while the average restaurant’s profit ranges from 3% to 9% of revenue. The lawsuit seeks triple damages, including for overcharges, since April 14, 2016 for dine-in and delivery customers in the United States at restaurants using the defendants’ delivery apps. The case is filed in the federal U.S. District Court, Southern District of New York as Davitashvili v GrubHub Inc., 20-cv-3000. Althoughanumber of preliminary documents in the case have now been filed,atrial date has not yet been set.
↑ Bhuiyan၊ Johana။ "Uber CEO Dara Khosrowshahi says UberEats hasa$6 billion bookings run rate"၊ Recode၊ June 4, 2018။
↑ "Uber Eats revenue"၊ Craft။ December 9, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wright၊ Johnathan L.။ "Uber Eats debuts Wednesday in Reno"၊ Reno Gazette Journal၊ September 5, 2017။
↑ Uber Begins Testing Lunch Delivery With UberFRESH (August 26, 2014)။ June 2, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UberFRESH Rebrands to UberEATS Just in Time to Expand Like Crazy (May 4, 2015)။ September 11, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ How Uber's latest update could poseamajor threat to GrubHub (August 17, 2015)။ September 11, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Uber’s New Update Gives Food Delivery As Much Attention As Transportation (August 17, 2015)။ September 11, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Uber Plans to Triple Headcount on Food Delivery in Europe Region။ Bloomberg LP (November 6, 2018)။ 29 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Dami။ "Uber Eats is changing its flat fees to delivery fees based on distance"၊ The Verge၊ August 8, 2018။
↑ Kerr၊ Dara။ "Uber Eats getsalittle cheaper andalittle more expensive" (in en)၊ CNET၊ August 8, 2018။
↑ Uber Eats to cut fees in battle with Deliveroo and Just Eat။ THE FINANCIAL TIMES LTD (February 20, 2019)။ 29 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Uber Eats To Test Flying Food To Customers By Drone In San Diego။ Forbes (June 12, 2018)။ 17 June 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Apple Card launches today for all US customers, adds 3% cash back for Uber and Uber Eats (in en-US)။
↑ Uber Eats invades restaurants with Dine-In option (in en-US)။
↑ "Uber Eats to pull out of South Korea amid tough competition" (in en)၊ Reuters၊ 2019-09-09။
↑ Tyko၊ Kelly။ Uber Eats launches delivery alternative with new pickup feature (in en-US)။
↑ Amid Layoffs, Uber Eats Partners with Burger King (in en-US) (2019-10-15)။
↑ Uber sells food delivery business in India to Zomato (in en-US)။
↑ Goel၊ Vindu။ "Uber Sells Food Delivery Business in India" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2020-01-20။
↑ Business၊ Hanna Ziady, CNN။ Uber suffers another blow as it loses McDonald's delivery monopoly in the UK။
↑ McDonald's UK taps Just Eat for delivery, ends Uber Eats exclusivity (in en-US)။
↑ Chiappetta၊ Marco။ Uber Eats Demand Soars Due To COVID-19 Crisis (in en)။
↑ Uber Eats decides to switch off in UAE (in en)။
↑ Mogg, Trevor (March 15, 2016)။ Uber enters the food delivery game။ Digital Trends။ October 15, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Uber Vs. Seamless & GrubHub: How To Order Food Via Uber Eats In New York, Chicago & Los Angeles။ 1 May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ September 18, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Uber launches lunch-delivery service in Chicago (April 28, 2015)။ September 18, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Said၊ Carolyn (August 18, 2015)။ UberEats comes to S.F., offering meal deliveries။ September 19, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Batey၊ Eve (2020-04-03)။ Delivery Apps Refuse to Temporarily Decrease the Fees They Charge Restaurants (in en)။
↑ Fickenscher၊ Lisa (2020-07-01)။ Uber Eats cuts fees for NYC restaurants as Grubhub rivalry heats up (in en-US)။
↑ Huet၊ Ellen။ Uber's 'F' Rating At Better Business Bureau Isn't For Surge Pricing -- Just For Unresponsiveness (in en)။
↑ Uber Technologies | Reviews | Better Business Bureau® Profile။
↑ ၃၂.၀ ၃၂.၁ ၃၂.၂ ၃၂.၃ Allyn၊ Bobby။ "Restaurants Are Desperate — But You May Not Be Helping When You Use Delivery Apps"၊ 2020-05-14။ "Frank points toaclause in the contracts restaurants and the food delivery apps agree to that prohibits owners from charging delivery customers more than people who dine in, even though delivery costs more. "By not forcing those purchasing on apps to bear the whole amount of the fees, instead forcing all menu prices to rise together, in-restaurant diners are effectively subsidizing Grubhub's high rates," said Frank, who argues such an arrangement is anti-competitive and illegal."
↑ ၃၃.၀ ၃၃.၁ ၃၃.၂ ၃၃.၃ Baron၊ Ethan။ "DoorDash, Uber Eats, Grubhub and Postmates make restaurant meals cost more: lawsuit - Four firms’ rise has ‘come at great cost to American society,’ suit claims"၊ 2020-04-14။ "Each of the firms uses “monopoly power” to prevent competition, limit consumer choice and force restaurants to agree to illegal contracts that have “the purpose and effect of fixing prices,” the suit claimed. ... The four companies give restaurantsa“devil’s choice” that requires them to keep dine-in prices the same as delivery prices if they want to be on the app-based delivery platforms, the suit claimed. And restaurants must pay commissions to the delivery firms ranging from 13.5% to 40%, the suit alleged. ... Establishments are forced to “calibrate their prices to the more costly meals served through the delivery apps,” the suit alleged."
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ ၃၄.၂ ၃၄.၃ Stempel၊ Jonathon။ "Grubhub, DoorDash, Postmates, Uber Eats are sued over restaurant prices amid pandemic"၊ 2020-04-13။ "GrubHub, DoorDash, Postmates and Uber Eats were sued on Monday for allegedly exploiting their dominance in restaurant meal deliveries to impose fees that consumers ultimately bear through higher menu prices, including during the coronavirus pandemic. Inaproposed class action filed in Manhattan federal court, three consumers said the defendants violated U.S. antitrust law by requiring that restaurants charge delivery customers and dine-in customers the same price, while imposing “exorbitant” fees of 10% to 40% of revenue to process delivery orders. The consumers, all from New York, said this sticks restaurants witha“devil’s choice” of charging everyone higher prices asacondition of using the defendants’ services."
↑ ၃၅.၀ ၃၅.၁ ၃၅.၂ ၃၅.၃ Dolmetsch၊ Chris။ "GrubHub, Doordash Accused in Suit of Pushing Prices Higher"၊ 2020-04-13။ "The New York customers, who seek class-action status, say the delivery services charge “exorbitant fees” that range from 13% to 40% of revenue, while the average restaurant’s profit ranges from 3% to 9% of revenue, making delivery meals more expensive for eateries. “Restaurants could offer consumers lower prices for direct sales, because direct consumers are more profitable,” the plaintiffs said. “This is particularly true of dine-in consumers, who purchase drinks and additional items, tip staff, and generate good will.”"
↑ တမ်းပလိတ်:Cite court
↑ Court Listener (2020-07-28)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အူးဘာအိစ်&oldid=702433" မှ ရယူရန်